Bankiga Dhexe ee Somaliya oo Amar ka soo saaray ganacsiga Forex Trade | STN Somali
Home Wararka Bankiga Dhexe ee Somaliya oo Amar ka soo saaray ganacsiga Forex Trade
Bankiga Dhexe ee Somaliya oo Amar ka soo saaray ganacsiga Forex Trade
Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa amar uu soo saaray waxaa uu ku faray dhammaan Bankiyada Ganacsiga inay ku xiraan xisaabaadka Suuqa Sarifka lacagaha Qalaad ee loo yaqaano Forex Trading, kaasoo muddooyinkii u dambeeyay aad ugu soo xoogeysanayay magaalada Muqdisho.
Go’aan ka soo baxay Guddoonka sare ee Maamulka Bankiga Dhexe ayaa lagu sheegay in qaraar lambarkiisa yahay 43/G, kaasoo lagu farayo in sida ugu dhaqsiyaha badan Bankiyada gaarka loo leeyahay dhammaan xisaabaadka (Bank Accounts) ee Ganacsatada iibiya lacagaha qalaad ee suuqyada caalamiga ah Forex Trading uga furan bankiyada.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay amar dhowaan ka soo baxay Booliska Soomaaliya oo lagu mamnuucay ganacsiga Suuqa sarifka lacagaha qalaad ee Forex Trading, kaddib markii doodo kala duwan oo dhinaca diinta ay hareeyeen oo ku aadan in Shareecada Islaamka aanay waafaqsaneyn ganacsigaas.
Previous articleXadka Soomaaliya iyo Itoopiya oo ay ka soo gudbeen Ciidamadii ugu badnaa Itoobiya
Next articleFaahfaahino kasoo baxaya qaraxii xoogaana e ka dhacay ex-control afgooye
Madaale: Gobolka Banaadir waxaa laga galayaa qalad ay adkaan doonto in la saxo
Indonesia oo joojisay Xajka sanadkan
Maxaa bisha looga arki waayay Dalalka Carabta? Maxayse Soomaalida ka baran karaan Ciidda sanadkaan?